सूर्यको रोशनीबाट व्याक्टेरिया र भाइरस नष्ट गर्ने तयारी - A2Z Online Khabar A2Z Online Khabar
सूर्यको रोशनीबाट व्याक्टेरिया र भाइरस नष्ट गर्ने तयारी
न्यूयोर्क, जेठ ६ : अहिले दुनियाँ कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट बाहिर निस्कन खोजिरहेका छन, यो बेला बैज्ञानिक आशा बढाइरहेका छन् । उनीहरु सायद दशकौँ पुरानो एक उपायबाट किटाणुलाई हावामा नष्ट गर्न खोजिरहेका छन् । यो उपायलाई ‘अपर रुम अल्ट्रा भायलेट जर्मी साइडल इर्रेडिएशन’ भनिन्छ ।
सरल भाषामा यसको अर्थ हुन्छ— सूर्यको रोशनीको शक्तिलाई घर, पसल या अफिसभित्र ल्याउनु । यो प्रविधिको प्रयोग गरिए बिना कुनै दुष्प्रभाव हावामा तैरिइरहेको किटाणु त्यो चाहे व्याक्टेरिया, फंंगस या कोरोनाजस्ता भाइरस, नष्ट हुन्छ ।
सूर्यको रोशनीले डिसइन्फेक्टेन्ट रुपमा काम गर्दछ
हार्वर्ड मेडिकल स्कूलको ग्लोबल हेल्थ एण्ड सोशल मेडिसिनका प्रोफेसर डा. एडवर्ड नार्डेल भन्छन्,— पहिले हामी यो उपायको प्रयोग गर्नमा संघर्ष गर्थिऊँ, तर अब हमी जान्दछौँ कि यो उपाय काम गर्दछ । सूर्यको रोशनी डिसइन्फेक्टेन्टको रुपमा काम गर्दछ । विशेषगरी यसको अल्ट्रा भायलेट किरणले हावामा तैरिने किटाणुलाई नष्ट गर्नमा मद्यतकारी हुन्छ ।
अहिलेसम्म किन प्रयोग गरिएन ?
यो प्रविधिलाई अहिले प्रयोग गर्नुको पछाडि दुइवटा कारण छन् । पहिलो— स्कूल तथा कलेजमा दशकौँदेखि यो सिकाइरहेका छन कि अल्ट्रा भायलेट किरण मनुष्यको लागि खतरनाक छ किनकी यसले छालामा मात्र खराब गर्दैन साथै यस्तो किरणले क्यान्सरको खतरा बढ्दछ ।
अल्ट्रा भायलेट किरणको प्रयोग महँगो
दोस्रो कारण— यसको प्रयोग महँगो हुनु हो । उदाहरणको लागि कुनै माध्यम आकारको वालमार्टको वेयरहाउस यदि यो टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्दछन भने उसको कमसेकम १ लाख बढि खर्च हुन्छ । यसमा बिजुली र अन्य खर्च अलग हुन्छ । जो साना व्यापारी हुनुहुन्छ वा आय कम छ, उनको लागि यो खर्च उठाउन मुश्किल पर्दछ ।
न्यूयोर्क इन्टरनेशनल एयरपोर्टमा प्रयोग सुरु
न्यूयोर्क अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यो प्रविधिको प्रयोग भर्खरै सुरु गरिएको छ । कोलम्बिया यूनिभर्सिटीका रेडियोलोजिकल रिसर्च सेन्टरका डाइरेक्टर डेविड ब्रेनरका अनुसार— संक्रमण दवाएपछि फेरि उठ्नेछ, शायद तबसम्म यो टेक्नोलोजी दुनियाँभरमा प्रयोगको लागि तयार हुनेछ ।
ढोकामा राखिनेछ अल्ट्रा भायलेट उपकरण
यो प्रविधिमा अल्ट्रा भायलेट कणलाई छाड्ने उपकरण ढोकामा लगाइन्छ । साथै सिलिंग फेनमा पनि लगाउन सकिन्छ ताकि पंखाले हावालाई माथि लैजान सकोस् र त्यसमा भएको किटाणु अल्ट्रा भायलेट किरणको निशाना बन्न सकोस् । बैज्ञानिक भन्छन्— अल्ट्रा भायलेट किरणले फंगसको डीएनए र भाइरसको आरएनएलाई नष्ट गर्दछ ।